In English In Hmong In Vietnamese
Sanadwalba, dadka baabuurta ku socda iyo kuwa lugta ah waxaa soo gaara dhawac iyo dhimasho kaga timaadda shilal iskudhicid ah ee tareenada. Ololaha Nolol-badbaadinta ee Minnesota waxa uu ka tirsan yahay Ololaha Nolol-badbaadin ee heer qaran ah ee ah hay'ad gaar ah ee samo fal ah ee waxbarid kuna howlan in laga dhameeyo shilalka, dhimashada ama dhaawaca ka dhaca isgoysyada haywayada iyo jidadka tareenada iyo goobaha ay leeyihiin jidadka tareenada.
Goobtaan waxaa aad:
baranaysaa sida darawalada iyo dadka lugeeya ay nabad u ahaan karaan ( iyo sidii iimtixaan ah aqoontaada xagga badbaadada ee hal xiraale iyo ciyaaro ka kooban aad isugu tijaabin lahayd) adiga oo ka heleya bogga Macluumaadka Badbaadada
wax dheeri ah ka ogaanyasaa maxaadarooyinka ay Ololaha Nolol-badbaadintu ka bixiyaan dugsiyadda iyo kumunityada.
Caruurta kaliya qeybtaan ku aadantahay! Barta sida aad uga badbaadi lahayd ee agagaarka jidadka iyo isgoysyada tareenada. Orod oo aad safar nabadeed ee la xiriira goobta intarnetka ee Safe-a-Rooni™.